Ithegi: ebay | Martech Zone
NgoLwesithathu, Oktobha 6, 2021 NgoLwesithathu, Oktobha 6, 2021 Douglas Karr
Njengoqoqosho lwesithathu ngobukhulu emhlabeni, ndiyasiqonda isizathu sokuba unganomdla wokungena kwintengiso yaseJapan. Ukuba uyazibuza ukuba ingaba iapps yakho inokungena njani ngempumelelo kwintengiso yaseJapan, ke qhubeka ufunda ukuze ufunde okungakumbi malunga noku! Intengiso yaseJapan yeApp App ngo-2018, intengiso yaseJapan yeCommerce yayixabisa i-163.5 yezigidigidi zeedola kwintengiso. Ukusuka kwi-2012 ukuya kwi-2018 intengiso yaseJapan yeCommerce ikhule ukusuka kwi-3.4% ukuya kwi-6.2% yentengiso iyonke. Ulawulo loRhwebo lwaMazwe ngaMazwe